Tupu ngosi ngosi ya, Amazon na -etinye Moto Z4 na ọrịre | Androidsis
Ọ bụghị nke mbụ, ọ gaghị abụkwa nke ikpeazụ, na ụlọ ahịa ngalaba ha na -ere ngwa nke e gosipụtabeghị n'ahịa. Okwu ikpe ikpeazụ, Amazon, nnukwu ọrịre dị n'ịntanetị nke nlekọta nwere tinye maka ire ere na United States Moto Z4 ọhụrụ, ọnụ nke a na -enyebebeghị n'ihu ọha.
Onye ọrụ nwere ọgụgụ isi nwere ohere ịtụ ahịa, iwu nke ọ natara n'ikpeazụ wee nye anyị ohere ikwenye nke nwere nkọwa nke ọdụ ụgbọ ọhụrụ a site na nyocha ya. Ebe a anyị na -egosi gị nkọwa niile nke Moto Z4 ọhụrụ.
N'ime Moto Z4 anyị na -ahụ nhazi nke Qualcomm Snapdragon 675, 8-core processor so ya na kaadị eserese Adreno 608. Ọ dị na abụọ 4 na 6 GB nke RAM, dị ka oghere nke nchekwa dị n'ime, dị na 64 na 128 GB. Ihuenyo nke ọdụ ụgbọ a ruru sentimita 6,4 nwere mkpebi HD zuru oke, ọ bụ ogwe OLED ma nwee nha ihuenyo 19: 9.
Batrị nke Moto Z4 ọhụrụ, ruru oke enweghị atụ nke 3.600 mAh, dakọtara dị ka a tụrụ anya ya, na -akwụ ụgwọ ngwa ngwa ma na -enye anyị ọtụtụ nnwere onwe maka ụbọchị ezumike ma ọ bụ ọrụ. Ọ gụnyere chaja 15w yana dakọtara na chaja ngwa ngwa.
Isi ihe ọhụrụ nke ọdụ ụgbọ ọhụrụ a, anyị na -ahụ ya na Igwefoto igwefoto nke Sony mepụtara wee rute 48 mpx, na oghere f / 1.6, nke na -enye anyị ohere ijide ihe onyonyo na -ekele teknụzụ 12 mpx Quad Pixel. Igwefoto n'ihu gụnyere ihe mmetụta 25 mpx nwere oghere f / 1.9. Igwefoto abụọ ahụ na -ejikọ ọgụgụ isi Artificial iji meziwanye nsonaazụ ikpeazụ nke ndị ejidere.
Ọnụ ego ọdụ ụgbọ mmiri nke nwere ohere iji nweta Moto Z4 bụ $ 499 wee tinye modul Moto 360 n'efu. Anyị amaghị ma ọ bụrụ na otu nkwalite a ga-abata na Europe ma ọ bụ na anyị ga-enwe ike ịzụta ọdụ na-enweghị Moto Mods a ma ama.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Tupu nkwupụta ngosi ya, Amazon na-etinye Moto Z4 n'ahịa